အဘယ်မှာရှိ Umbrella မှစ. လာကြသလား
အဆိုပါ Umbrella တီထွင်ဘယ်သူနည်း
ရှေးဟောငျးအီထီးသို့မဟုတ် parasols ပထမဦးဆုံးအနေအရိပ်ပေးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
အခြေခံထီးကျော်ကို 4000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတီထွင်ခဲ့သည်။ ရှေးဟောင်းအနုပညာအတွက်ထီးနှင့်အီဂျစ်, အာရှုရိပြည်, ဂရိနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏အပိုငျးအများ၏သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။
ဤရွေ့ကားရှေးခေတ်ထီးသို့မဟုတ် parasols ပထမဦးဆုံးအနေအရိပ်ပေးဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ တရုတ်မိုဃ်းကိုရွာစေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်အသုံးပြုရန်၎င်းတို့၏ထီးရေစိုခံဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကမိုးရွာရွာအဘို့ထိုသူတို့သုံးစွဲဖို့နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏စက္ကူ parasols နွမ်းနှင့် lacquered ။
အဆိုပါ Term Umbrella ၏ဇစ်မြစ်
အဆိုပါစကားလုံးက "ထီး" လကျတငျအမြစ်စကားလုံးအရိပ်သို့မဟုတ်အရိပ်အဓိပ်ပာယျ "umbra," ကနေလာပါတယ်။ ထဲမှာစတင်ကာ 16 ရာစု ထီးအထူးသဖြင့်ရှိအနောက်ပိုင်းကမ်ဘာပျေါတှငျလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည် မိုးရာသီ မြောက်ပိုင်းဥရောပရာသီဥတု။ ပထမတော့သူကအမြိုးသမီးမြားအဘို့အသင့်လျော်မှသာတစ်ဦးဆက်စပ်ပစ္စည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါရှခရီးသွားနှင့်စာရေးဆရာ Jonas Hanway (1712-86) နှစ်ပေါင်း 30 ကအင်္ဂလန်အတွက်လူသိရှင်ကြားတစ်ထီးယူသွားနှင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူကလူတို့တွင်ထီးအသုံးပြုမှုခေတ်စားလာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်လူကြီးလူကောင်းမကြာခဏအဖြစ်သူတို့ရဲ့ထီးရည်ညွှန်း "Hanway ။ "
ပထမဦးဆုံးအလုံးကိုထီးဆိုင် "ဂျိမ်းစမစ်နှင့်သား။ " ဟုခေါ်ခဲ့သည် အဆိုပါဆိုင်မှာ 1830 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်နေဆဲ, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ 53 နယူးအောက်စဖို့လမ်းမှာအင်္ဂလန်တွင်တည်ရှိသည်။
အစောပိုင်းဥရောပထီးသစ်သားသို့မဟုတ် whalebone ၏ လုပ်. alpaca သို့မဟုတ်တော၌ထားသောပတ္တူများနှင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါသိမ်းသွားလေ၏ ebony တူသောခက်ခဲတောအုပ်ထဲကထီးများအတွက်ကွေးလက်ကိုင် လုပ်. ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။
1852 ခုနှစ်, ရှမွေလသည် Fox ကထီးဒီဇိုင်း ribbed သံမဏိတီထွင်ခဲ့သည်။ Fox ကလည်း "အင်္ဂလိပ်သံမဏိကုမ္ပဏီ" ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်နှင့် farthingale ကျန်ရှိနေ၏စတော့ရှယ်ယာတက်သုံးပြီးတစ်လမ်းအဖြစ်သံမဏိ ribbed ထီးကိုတီထွင်ရန်ပြောဆိုထားသည်, သံမဏိအမျိုးသမီး corsets များတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိနေမည်။
ခေတ်သစ် Times သတင်းစာ
1928 ခုနှစ်, ပညာရှင် Hans Haupt အဆိုပါအိတ်ကပ်ထီးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူမသည်အဆိုပါထီး "ပရောပ" ဟုခေါ်ခဲ့သည်နှင့်သြစတြီးယားကုမ္ပဏီအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်စက်တင်ဘာလ 1929. အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ရာများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်း foldable ထီးများအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင်သည့်အခါဗီယင်နာ၌, သူမကပန်းပုလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျာမနီမှာသေးငယ်တဲ့ foldable ထီးယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ foldable ထီးများအတွက်ဂျာမန်ဘာသာစကားမှာတစ်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ဖြစ်လာခဲ့သည်သောကုမ္ပဏီ "Knirps" ဖွငျ့ခဲ့ကြသည်။
1969 ခုနှစ်တွင်ဘရက်ဖို့ဒအီး Phillips က, Loveland ၏အလယ်ပုံထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ပိုင်ရှင်, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကသူ့များအတွက်မူပိုင်ခွင့်ရရှိသော "အလုပ်လုပ်ခေါက်ထီး။ "
နောက်ထပ်ပျော်စရာတကယ်တော့: ထီးလည်းအဖြစ်အစောပိုင်း 1880 အဖြစ်ဦးထုပ်သို့ထွင်းထုခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးအဖြစ်မကြာသေးမီက 1987 အဖြစ်ပါပြီ။
ဂေါက်ထီး, ဘုံအသုံးပြုမှုအတွက်အကြီးဆုံးအရွယ်အစားတအနှံ့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဝှမ်း 62 လက်မရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် 60 မှ 70 လက်မကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုအထိနိုင်ပါတယ်။
ထီးယခုကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာ့စျေးကွက်နဲ့စားသုံးသူထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ 2008 ၏အဖြစ်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အများဆုံးထီးတရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်နေကြသည်။ Shangyu ၏မြို့တစ်ဦးတည်းထက်ပိုမို 1000 ထီးစက်ရုံများရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်မှာတော့ $ 348 သန်းတန်ဖိုးရှိအကြောင်းကို 33 သန်းထီး, နှစ်စဉ်ရောင်းချကြသည်။
2008 ၏အဖြစ်, အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့ထီး-related တီထွင်မှုအပေါ် 3000 တက်ကြွမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်။
အဆိုပါ iPod ကိုသမိုင်း
ဂျိုးဇက် Cochrane နှင့်ပန်းကန်ဆေးစက်၏တီထှငျခဲ့
Leonardo da Vinci ၏တီထွင်မှု
အဆိုပါဂန္ထဝင်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသမိုင်း '' စကားကို ပြော. နှင့်စာလုံးပေါင်း '' Toy
ယင်းကိုစကင် tunneling microscope တီထွင်ဘယ်သူနည်း
တီထွင်သူ - ထိုဆယျ့ကိုးရာစု၏တီထွင်မှု & တီထွင်သူ
အလက်ဇန်းဒါးဂရေဟမ်ဘဲလ်ရဲ့ Photophone ရှေ့တွင်၎င်း၏အချိန်တစ်တီထှငျခဲ့သခဲ့
တစ်ဦးအရောင်အသွေးစုံ Shift ကဘာလဲ?
မိန့်ခွန်း print ထုတ်လို့ရတဲ့၏အစိတ်အပိုင်းများ
အကောင်းဆုံးအဆိုတော်များ '' မဂ္ဂဇင်းများ
အဆိုပါ Oneota ယဉ်ကျေးမှု - အမေရိကန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း၏နောက်ဆုံးသမိုင်းမယဉ်ကျေးမှု
စျေးပေါတပတ်ရစ်ကားဝယ်ပါရန်ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးနေရာများ
ကို '90 လှုဒါက 8 Cover Songs ရဲ့
"Doxa" ဟုအဆိုပါ Term အဘယျသို့ဆိုလိုသနညျး
အဆိုပါ Boer စစ်ပွဲ
အဆိုပါတဲ့ dwarf Planet ကို Haumea Explore
ဗိမာနျတျောတက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Valentine Day ကို: ဘာသာရေး Origins နှင့်နောက်ခံသမိုင်း
Smorzando (smorz ။ )
"ကြီးမားတဲ့ Wings နှင့်အတူတစ်ဦးကအလွန်ဟောငျးက Man": လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
အဘယ်အရာကိုမတ်လအတွင်း Read မှ
Grammar အတွက် conditional အပိုဒ်